Steam Deck: Manjaro ndiyo inokurudzirwa sisitimu yekusimudzira kwayo | Linux Addicts
pablinux | 13/11/2021 11:55 | chiutsi
Svondo rino kwave nekufamba kune chekuita ne Steam dhizaini. NeChina, Valve yakapaza nhau dzakaipa: iyo console haizokwanisa kutanga kutumira kusvika Kukadzi 2022 nekuda kwematambudziko ekupa. Maawa mashoma apfuura takaziva, kuburikidza GamingOnLinux, iyo Valve iri kugadzirira yayo SteamOS 3, iyo inoshanda sisitimu ichashandiswa neramangwana console. Sezvataiziva kare, ichave yakavakirwa paArch Linux, uye parizvino hapana chiripo chinogona kushandiswa. Kunyange zvakadaro, vachabudisa chimwe chinhu nokukurumidza.
Uye ndezvekuti iyo Valve console haisi yakajairika. Haisi nekuda kwezvainotakura mukati, iyo yakafanana nekombiyuta, uye nekuda kwezvainazvo kunze, pakati payo tinoona mapepa ekubata. Nechikonzero ichocho, Valve inotarisira kuti basa riitwe pazvinhu zvakaita seyekupinza gamepad nerutsigiro rwekugadzirisa, chimwe chinhu icho kurudzira kuita muManjaro KDE. Chikonzero ndechekuti Manjaro yakavakirwa paArch, uye desktop iyo SteamOS 3 ichashandisa mune yayo desktop mode zvakare Plasma.
SteamOS 3 kubva kuSteam Deck inogona kushandiswa pane chero komputa
Valve yakagadzira maturusi maviri ekubatsira vanogadzira kuyedza basa ravo. Nezvishandiso izvi, vanogadzira vanozokwanisa kugadzira mitambo kubva kumuchina wekusimudzira weSteam Deck kana mumwe muchina weLinux. Uye zvinotarisirwa kuti SteamOS 3 inowanikwawo kumakomputa. Muchokwadi, Valve yakakurudzira mini-kombuta NUC kune avo vanogadzira vanoda kuyedza basa ravo mumunda rakafanana nekoni.
Kunyangwe ichigona kupawo chiitiko chedesktop, SteamOS 3, senge shanduro dzakapfuura, inotarisa pane yevhidhiyo mutambo ruzivo. SteamOS 2.x yaivepo yemakomputa, kunyangwe haina kunyatsobudirira. Iyo yechitatu vhezheni inogona kunyengedza vamwe vatambi, kubvira Arch Linux + Plasma ibheti yakanaka. Chasara kuzivikanwa ndechekuti ichave iripo riini, kunyangwe zvichitendwa kuti ichave mushure mekutangwa kweSteam Deck.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Valve inokurudzira Manjaro kushanda pakuvandudza kweSteam Deck uye yayo SteamOS 3
Red Hat Enterprise Linux 8.5 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo